Vashanyi veIsrael vanoenda kunzvimbo dzakamborambidzwa - zviuru mazuva ese.
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Israel Nhau » Vashanyi veIsrael vanoenda kunzvimbo dzakamborambidzwa - zviuru mazuva ese.
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Israel Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Israel inobuda mukushanya iri kuwedzera nemakumi ezviuru zvevaIsrael vachienda kunzvimbo nyowani. Idzi nzvimbo nyowani dzaive dzisingasvikike kubva nyika yeIsrael payakazvimirira. Nekudaro, izvozvi sarudzo kune dzakawanda dzendege pazuva kubva kuIsrael kuenda kuDubai, Abu Dhabi, nedzimwe nzvimbo dzeArabhu, zvinounza musika mutsva wekufamba unobuda musika kubva zero kusvika pakuwedzera.
Kupemberera kuvhurwa kwe World Tourism Network (WTN) nemwedzi wezviitiko zvinonakidza kubva pasirese pasirese, Dov Kalmann, CEO weTerranova Tourism Kushambadzira & muTel Aviv, Israel, akagovana pfungwa dzake pamamiriro ezvinhu ezvekushanya kwenyika yake pamusangano chaiwo wakaitwa muna Zvita 9, 2020.
“Senge chero imwe nyika takatambura zvikuru neCOVID-19. Isu taive pakati penyika dzekutanga kuvhara miganhu yedu neyekutanga kukiya, uye isu taive nyika yekutanga pasirese ine kukiya kwechipiri. "Tava kunze kwenguva iyoyo kunyangwe hazvo paine yambiro ikozvino yekukiya kwechitatu," akadaro Kalmann.
Munguva ino yekuve pakati, akati vanotarisira kuona mhinduro yekupedzisira yenguva ino inoshamisa uye vazviwane vari mumashure me COVID nguva kubva muna Kubvumbi zvichienda mberi pasirese repasi rose.
Kalman akaenderera mberi nekugovana hwaro hwemusika wekushanya unobuda muIsrael, achiti zvinofanirwa uye zvinogona kuve zvinofadza zvikuru kune zvigadzirwa zvepasirese zvepasirese zvine chekuita nemusika wavo mudiki uye uri kukura.
“Kune mamirioni gumi nematanhatu emaJuda pasi rose apo pairi mamiriyoni manomwe ari kugara muIsrael nevanhu vanosvika miriyoni pfumbamwe. Kunze kweiyo mamirioni mapfumbamwe, mu14.6, tanga tine 7 miriyoni nzendo dzakaitwa ne9 maIsrael. Iyi inhamba inoshamisa yemari imwe yekufamba. VaIsrael vanenge vazvarwa vaine sutukezi. "Iyi inhoroondo yemakore zviuru zviviri zvemazana edu isu maJuda tichitenderera nenyika, pamwe naMosesi pamwe semutungamiriri wekushanya."
Kuti unzwe zvimwe zvehurukuro inonakidza yaKalmann uye kudzidza zvakawanda nezvenyaya iyi, ona vhidhiyo
Juergen Thomas Steinmetz, muvambi weWorld Tourism Network, akati sekutanga kweWTN, vanga vatove nezviitiko zvakatenderedza gumi nembiri, zvese zvingave inotariswa nekuteererwa pano.
Unoda kuve nhengo yeWorld Tourism Network? Dzvanya pa www.wtn.travel/register
PAMUSORO PENYIKA YOSE TOURISM NETWORK
World Tourism Network ndiro izwi rekare-risingapfuure remabhizimusi madiki-nepakati (maSME) muindasitiri yekufamba neyekushanya kutenderera pasirese. Nekubatanidza kuyedza, WTN inounza kumberi izvo zvido nezvishuwo zvemabhizimusi aya nevaya vanobatana navo. Iyo network inopa izwi kune maSME pamisangano mikuru yekushanya pamwe nekukosha kunetiweki kunhengo dzayo dzinomiririra nyika dzinopfuura zana nemakumi matanhatu.